FBC - Ji’oottan 2n darban dhiha Tigraayitti humnoonni farra nageenyaa 98 to’annoo jala oolaniiru
Ji’oottan 2n darban dhiha Tigraayitti humnoonni farra nageenyaa 98 to’annoo jala oolaniiru
Finfinnee, Ebila 13,2009(FBC) – Ji’oottan lamaan darbanitti karaa dhiha Tigraayin Eertiraadhaa ergama badii qabatanii gara biyyaa seenaa kan turan humnoonni farra nageenyaa 98 hidhannoo guutuu waliin to’annaa jala oolan.
Humnoonni badii kanneen garee shororkeessaa Ginboot 7 fi ABO irraa egama shororkeessummaa qabataniiti gara Ityoophiyaa seenaa turan jechuun Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti kan himan itti aanaa bulchaa fi itti gaafatamaan dhimma nageenyaa godinichaa obbo Takiyuu Matakooti.
Humnoonni kanneenis raayyaa ittisaa fi jiraattota naannichaatin hordoffii taasifamaa tureen akka to’annoo jala oolanis eeraniiru.
98n keessaa 15 torbee darbe gara biyya jiddugaleessaatti seenuuf osoo socho’aniiyi to’annaa jala kan oolfaman.
Dhaabbilee diinagdee fi hawaasummaa biyyattiirratti miidhaa qaqqabsiisuuf akka ture irra ga’ameeras jedhan obbo Takiyuun.
Oduuwwan Biroo « Balaa hojiirratti mudatu hir’isuuf too’annaa cimsuu akka barbaachisu ibsame	Itiyoophiyaan Fooramii ‘Belt and Road’ Chaayinaatti geggeeffamu irratti nihirmaatti »